Timisoara, oo leh qurux Romania | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Maxaa la arkaa, Roomaaniya
Bariga Yurub Waa soojiidasho qaddar. Qarniyo badan oo taariikhi ah iyo nidaamyo siyaasadeed ayaa ka tagay raadkooda waxaana jira magaalooyin si qurux badan u qurux badan. Tusaale ahaan, Timisoara, oo ku taal Romania.
Timosara waa magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka iyo xarun weyn oo ku taal galbeedka Romania. Waxaan arki doonaa maanta sababta loogu yaqaanay Vienna yar ama Magaalada ubaxa...
2 Dalxiiska Timisoara
Magaca wuxuu ka yimid Hangari iyo degitaanadii ugu horreeyay waxay dib ugu noqdeen waqtiga, xitaa Roomaankii. Kadib waxay dhacdaa qarniyadii dhexe, agagaarka qalcad uu dhisay Charles I ee reer Hangari, waana la ogaa inay ahaan jirtay xilliyadii dagaalka u dhaxeeyay Kirishtaanka iyo Turkidii Cusmaaniyiinta, magaalo xuduudeedku. Sidaa darteed, waxay la kulantay dhowr ciqaab iyo weeraro illaa ay ku sii jirtay gacanta Ottoman in ka badan qarni iyo badh.
Timisoara waxaa dib u habeeyay Amiir Eugene oo ka socday Savoy sanadkii 1716 wuxuuna ku sii jiray gacanta Habsurgs ilaa bilowgii qarnigii XNUMXaad. Dagaalkii koowaad ee adduunka kadib Hungary waxay u dhiibtay magaalada Romania, iyo intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka waxaa soo gaadhay burbur badan Ugu dambeyntii, hoos yimid wareeggii Soofiyeeti, dadkeedu wuu kordhay oo waa la warshadeeyay.
Magaalada waxay ku taal bannaanka Banat, oo udhow kala goynta webiyada Timis iyo Bega. Halkan waxaa ku yaal qoyan oo magaaladu waxay ahayd waqti dheer meesha kaliya ee aad uga gudbi karto aaggaas.
Xaqiiqdii, waxay sidoo kale u adeegtay difaac, in kasta oo u dhawaanshaha huurka badani u keenay cayayaan badan. Qarnigii XNUMX-aad, shuqullada guud awgeed, magaaladu waxay bilaabatay inay ku socoto kanaalka Bega ee ma ahan wabiga Timis, ka dib wax walba way hagaageen.
Dhaqan ahaan waxay ahayd magaalo u heellan wax soo saarka, waxbarashada, dalxiiska iyo ganacsiga. Maanta waxay leedahay a Nidaamka gaadiidka oo leh toddobo khadadka taraamka, siddeed basaska tarooli iyo in kabadan labaatan khadadka basaska. Sidoo kale waxaa jira baaskiilado dadweyne oo leh 25 xarumood iyo 300 oo baaskiil oo loo isticmaali karo bilaash, labadaba dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha, waxaana jira a vaporetto kaas oo mara marinka kanaalka. Sidoo kale dadweynaha.
Magaaladu malahan matxafyo badan sida magaalooyinka kale ee Yurub, laakiin haddii aadan aheyn cayayaan dhaqameed waxaad jeclaan kartaa fikradda ah inaadan booqan matxafyada iyo qolalka kale maalintii oo dhan. Marka, Timisoara waxay na siisaa a madxafyo xiiso badan:
el Matxafka Farshaxanka ee Timisoara Waxay ku taal fagaaraha Unirii waana dhisme qarnigii 10-aad. Waxaa jira maxalli, casri, farshaxan qurxin, sawirro iyo xardho iyo farshaxanka yurubiyanka guud ahaanna waxaa inta badan jira bandhigyo iyo dhacdooyin. Qiimaha gelitaanka waa RON 10 wuxuuna furmayaa Talaadada ilaa Axada 6 am ilaa XNUMX pm.
el Madxafka Qaranka Banat waa mid matala gobolka. Waxay ka shaqeysaa Qalcadda Huniade, ee ku taal bartamaha magaalada, dhismaha ugu da'da weyn magaalada. Waxaa jira dhowr waaxood: qadiimiga ah, taariikhda, cilmiga dabiiciga ah iyo waliba kan Matxafka Traian Vuia, oo loogu talagalay hal-abuurka Romania ee isla magaca, hormoodka duulista.
el Matxafka Tuulada Waxay ku taal duleedka Timisoara, aag aad u cagaaran waxayna si fiican uga tarjumaysaa waxa tuulo dhab ah tahay. Waxay leedahay dhowr dhisme, kaniisad iyo goob wax lagu shiido, dhammaantoodna dhaqameed oo leh qaabab ka yimid waqtiyada iyo gobollada kala duwan. Waa socod fiican oo waxay ku dhowdahay beerta xayawaanka si aad u booqan karto labada goobood. Waxaad ku imaaneysaa baska waxuuna ka galayaa 5 RON. Waxay leedahay saacado xagaaga iyo jiilaalka.
el Matxafka Macaamiisha Shuuciga ah dhaqan ma aha. Waa matxaf xoogaa naadir ah oo ka tarjumaya xilligii hantiwadaagga ee magaalada. Waxay ka shaqeysaa qaybta hoose ee Scart Bar, guri duug ah oo leh beero weyn. Waa goob saaxiibtinnimo leh oo si qurux badan loo qurxiyey. Madxafka aruurinta ayaa leh dhamaantiis waxaana lagu sameeyay tabarucaad asxaabta iyo martida ah. Wax kasta oo la xiriira xilligii shuuciyadda. Waxaad ka heli kartaa Szekely Laszlo 1 Arh.
el Xuskii Kacaanka xusuusnow sanadkii 1989 oo Midowgii Soofiyeeti kala jabay. Kacaankii Romania wuxuu ka bilaabmay halkan Timisoara waana summad magaalada ka jirta. Boggan waxaa loo maleynayaa inuu yahay mid ku meel gaar ah isla markaana waqti uun jiri doono matxaf ku saabsan. Xusuusta waxay ku taal Calle Popa Sapca, 3-4 qiimaha soo galintuna waa 10 RON. Wuxuu furmayaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo iyo Sabti 9 subaxnimo ilaa 2 galabnimo.
Sida aad aragto, matxafyada ayaa yar markaa waxaa jira waqti badan oo noocyada booqashooyinka ah. Timisoara waa magaalo weyn oo taariikh leh taariikhdeeda ugu yaraan qarnigii XNUMXaad, sidaa darteed hadda ku dhex soco jidadkeeda Waa soo jiidasho.
Sidaa darteed, booqashada koowaad waa inaadan ka maqnaan qodobo gaar ah gaar ahaan. Magac ahaan, ka Fagaaraha Isbahaysiga, oo ah ta ugu faca weyn magaalada. Magaceedu wuxuu dib ugu soo laabtay 1919, Dagaalkii Koowaad ee Adduunka kadib, maadaama ciidammadii Roomaaniya ay halkan isugu soo urureen markii ay magaalada soo galeen.
Leh a hawada baroque dhismooyinka ku hareeraysanna waa kaniisadda Serbia ee Orthodox, kaniisada Katooliga Romaniga, guriga Brück iyo qasriga Baroque. Dhamaan aad u qurux badan Waxa kale oo jira makhaayado, markaa xagaaga aad bay u madadaalo badan tahay in la fadhiisto oo dadku daawadaan. Fagaaraha kale ee xiisaha leh waa Fagaaraha Victoria, sidoo kale loo yaqaan Opera Square. Magaca cusub ayaa ah kadib burburkii shuuciyadda.
Fagaaraha waxaa dhinac yiil laba dhisme oo summad leh: the Katidralka Orthodox dhanka koonfureed iyo Tiyaatarka Qaranka dhanka woqooyi. Waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad si loogu beddelo qalcaddii hore ee qarniyadii dhexe, sidaas darteed waxay leedahay dareen ah Art-Noveau waxaana loogu talagalay socod, dukaamo, makhaayado iyo teerari. Haddii aad tagto Kirismaska, waxaa jira suuqa Kirismaska.
Kortaan kale oo weyn ayaa ah ku soco dhinaca webiga Bega. Ama samee safarka baaskiilka. Waa wax wanaagsan maalin qoraxeed waxaadna ka bixi kartaa gees ilaa gees magaalada, adoo ka tallaabaya jardiinooyinkeeda waaweyn. Xagaaga waxaa jira barandaro badan oo aad ku raaxeysan karto biir qabow qorraxduna markay dhacdo iyana waa meel caan ah.
Ugu dambeyntiina, waxaan jeclahay inaan ku dul duulo magaalooyin halkanna waad ku sameyn kartaa diyaarad. Duulimaadku waa saacad badhkeed waxayna ku kacaysaa 75 euro. Haddiise qorraxdu dhacdo ee aad rabto inaad baxdo oo aad dadka aragto, nasiib wanaag magaaladu waxay leedahay nolosha habeenkii firfircoon. Goob caan ah oo caan ah ayaa ah D'arc, Fagaaraha Unirii. Muusig wanaagsan, qiimo dhexdhexaad ah, oo caan ku ah shisheeyaha iyo shisheeyaha. Nasiib wanaag wuxuu furmayaa goor dambe, laga bilaabo 11 pm ilaa 5 am.
Barta kale ee habeenku waa Reflektor, kaas oo furmay 2017, hoolka xafladaha. 80's Baab Waa mid ka mid ah baararka badan ee ku yaal Timisoara halkaasoo aad sidoo kale ka cabi karto, ka dheeli karto. Ma ahan xarunta, laakiin haddii aad ka timid 80s-ka waxaa habboon inaad booqato xerada jaamacadda. Taine iyo Escape waa meelo kale oo lagu ciyaaro oo lagu baashaalo.
Ma jeceshahay Timisoara? Waa meel la tagi karo (qiimaha biirku waa qiyaastii 1 euro, qado 25), waxay kudhowdahay kaliya seddex saac Budapest iyo Belgrade iyo shan Vienna.
Waa magaalo in dhaqanka jacaylka, ciidaha filimada iyo tiyaatarka, ayaa leh gastronomy wanaagsan dadkuna way fiican yihiin oo dhaqamada badan. Qaab dhismeedkeedu waa qurux, wuxuu leeyahay taariikh, wuxuu leeyahay nolol habeennimo, dadku waxay badanaa ku hadlaan Ingiriis iyo xaqiiqo taariikhi ah, Timisoara waxay ahayd magaaladii ugu horaysay ee is xoraysay kadib burburkii shuuciyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Roomaaniya » Timisoara, oo leh qurux Romania